Wararka Maanta: Jimco, Jun 15, 2012-Dowladda Koonfur Afrika oo sheegtay inay Xirayso 30-ka bishan Xarun lagu qaabilo Qaxootiga ee ku taalla Cape-town
Kulummo joogto ah oo maalmihii u dambeeyay ay wasaarada arrimaha gudaha ay u qabanaysay urrurada u dooda xaquuqda qaxootiga ay u soo bandhigtay sababaha loo xerayo iyo halka ay ku qaabili doonaan dadka soo galootiga ah ee imaanaya Koonfur Africa hey’adahasi waxaa ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee Koonfur Afrika (SASA).
Mas’uuliyiin ka socota wasaarada arimaha dibada ayaa ku qanciyay ururadii kazoo qeyb galay in loo rarayo xaduuda laga soo galo dalka isla markaana halkaasi lagu qaabili doono balse arintaasi ayaa la marsiin waayay hey’addo badan oo ay ka mid tahay tan SASA ayaa la rumaysan yahay in wasaaradani lala kori doono maxkamad sare.
Gudoomiyihii hore ee jaaliyada Soomaalyeed ee SASA, Xuseen Cali Cumar ayaa sheegay in arrintan ay dhabar-jab xoogan ku tahay soo-galootiga nolosha u soo raadsanaya Koonfur Africa wuxuuna warka intaasi ku daray in ay sii wadayaan dadaalada ay ku doonaayaan in xafiiskani uu sii furnaado maadaama uu haayo shaqo badan oo loo baahan yahay.
Xariirka guud ee jaaliyada Soomaalida South Africa SASA Xadiis Xaaji Aadan oo la hadlayay saxaafada ayaa sheegay in ay abaabulayaan banaanbax sal balaaran oo loogu soo horjeedo xeritaanka xafiiska qaabilaada Qaxootiga ku nool K/Africa.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in qaxootiga cusub ee soo galootiga ah lagu qaabili doono xuduudda dalka, halka kuwa horey u joogay lagu qaabili doono daarta weyn ee Costom House iyo Home Affairs-ka weyn eek u yaala magaalada Cape Town Baraka Streed Agagaarka saldhiga Booliska iyo Maxkamada sare ee Cape Town.